Inona no andraikitra ilaina amin'ny departemanta marketing dizitaly ankehitriny? | Martech Zone
Inona no andraikitra ilaina amin'ny departemantan'ny marketing nomerika ankehitriny?
Talata, Febroary 1, 2022 Alakamisy Febroary 3, 2022 Douglas Karr
Ho an'ny sasany amin'ireo mpanjifako dia tantiko ny talenta rehetra ilaina amin'ny ezaky ny varotra nomerika. Ho an'ny sasany dia manana mpiasa kely izy ireo ary ampitomboinay ny fahaiza-manao ilaina. Ho an'ny hafa dia manana ekipa matanjaka matanjaka ao anatiny izy ireo ary mila fitarihana amin'ny ankapobeny sy fomba fijery ivelany fotsiny mba hanampiana azy ireo hivoatra sy hamantatra banga.
Tamin'ny fotoana nanombohako ny orinasako voalohany dia maro ireo mpitarika ao amin'ny indostria no nanoro hevitra ahy manokana sy hanao andraikitra manokana; na izany aza, ny elanelana izay hitako tamin'ny ankamaroan'ny orinasa dia ny tsy fananan'izy ireo ekipa mahay mandanjalanja ary niteraka banga tamin'ny paikadin'izy ireo izay tsy tazana izany. Tsy midika izany fa tsy nahomby tamin'ny fomba rehetra izy ireo, midika fotsiny izany fa tsy nahatratra ny fahafaha-manao feno tamin'ny fananana nananany izy ireo.
Tokony hanakarama ve ianao sa mpiara-miasa?
Tsy ny fikambanana rehetra no manana loharanon-karena hanakarama mpiasa manontolo andro. Amin'izao fotoana izao, tsy mahazatra ny manana mpiara-miombon'antoka ivelany amin'ny ezaka ara-barotra nomerika.
Fahazoan-dàlana ho an'ny fitaovana - Manana fidirana amin'ny sehatry ny orinasa aho ahafahako manonitra ny vidin'ny mpanjifa rehetra. Tena afaka mamonjy orinasa kely dia kely izany.
Focus - Amin'ny maha loharano ivelany ahy dia manana tombony miavaka aho amin'ny tsy fitandremana ny tenako amin'ny fiasan'ny orinasa, ny fivoriana, ny politika, na ny fameperana ny teti-bola (matetika) aza. Matetika aho no nokaramaina hamaha olana ary avy eo manenjika tsy an-kijanona - miaraka amina orinasa mandoa ny sanda omeko fa tsy karama mety hamokatra na mety tsy hamokatra.
Turnover - Saika ny orinasa rehetra dia manana fihenam-bidy, noho izany dia vitako ny mandrakotra ny banga amin'ny fahaiza-manao rehefa misy ny mpanjifako miasa izay mivadika. Ary saika ny fikambanana rehetra dia manana fivarotana!
Fampiharana - Ny fampiharana vahaolana vaovao dia mety hanimba ny ekipa ary tena mahasosotra ny mpiasanao. Ny fitondrana mpiara-miombon'antoka amin'ny fampiharana dia fomba tsara hahazoana ny fahaiza-manao vonjimaika sy ny loharano ilainao mba hahazoana fampiharana mahomby.
Vanim-potoana - Matetika ny orinasa dia manana fitakiana ara-potoana izay mihoatra ny harena anatiny. Ny fananana mpiara-miasa tsara izay afaka mampitombo ny mpiasanao dia ilaina amin'ny fotoan-tsarotra.
Niche Expertise - Ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy afaka manakarama loharano ho an'ny anjara asa ilaina rehetra, saingy namolavola izany tamba-jotra fahaiza-manao izany aho nandritra ny taona maro niaraka tamin'ny mpitarika voaporofo. Midika izany fa afaka mitondra ny anjara andraikitra ilaina aho, manatsara ny teti-bola ary mitondra tena tompondaka izay hampitombo ny vintana.
Fahalalana midadasika - Amin'ny alàlan'ny fiasana manerana ny indostria sy ny fijanonana eo ambonin'ny fironana indostrialy, mitondra vahaolana vaovao ho an'ny mpanjifako aho. Raha manandrana paikady na sehatra amin'ny orinasa iray izahay ary mahomby izany dia entiko any amin'ireo mpanjifako rehetra ary apetrako amin'ny olana kely kokoa noho ny hoe nanao azy samirery ny mpanjifa.
Ity infographic avy amin'ny Spiralytic, Ahoana ny fananganana ny ekipan'ny Marketing nomerika anao, antsipirihany ireo andraikitra 13 ilaina mba hahombiazan'ny ekipa marketing nomerika maoderina.
Fahaizana ara-barotra nomerika
Ny sampana ara-barotra ankehitriny dia iharan'ny tsindry mafy. Matetika misy fanerena hanapaka mpiasa, hifindra monina any amin'ny fitaovana vaovao, ary hampitombo hatrany ny varotra amin'ny alalan'ny haino aman-jery sy fantsona vaovao. Sarotra ho an'ny ekipan'ny varotra ny manavao amin'ny loharano voafetra… aza mampaninona ny manao asa andavanandro. Rehefa mitady hanakarama loharanon-karena ho an'ny ekipanay izahay na manao tolo-kevitra ho an'ny mpanjifanay, dia matetika izahay no manao fitiliana fitondran-tena mba hahazoana antoka fa mifanaraka tsara… fa tsy ny fahaiza-manao mety ihany… dia raisina amin'ny:
Self-Atosiky - Raha kely ny fotoana hanoroana sy hanampiana ao anatin'ny ekipan'ny varotra, dia tsy maintsy mahita mpiasa mahazo aina amin'ny fikarohana sy fitadiavana ny vaovao ilainy amin'ny Internet ianao. Tsy ilaina ny miandry fiofanana amin'izao fotoana izao, noho ny fahalalan'izao tontolo izao eo am-pelatanantsika.
Role-flexible – Ny ankamaroan'ny sampan-draharaha ara-barotra dia tsy manana roa amin'ny toerana tsirairay, noho izany dia tena ilaina ny fanofanana mifanandrify sy ny fahafahan'ny andraikitra. Ny mpamorona sary dia mety mila mitsambikina amina sehatra mailaka ary mamolavola mailaka. Mety mila manoratra dika mitovy amin'ilay tranokala ny manam-pahaizana manokana momba ny media sosialy. Mahafinaritra ny mahita olona tsy mahazo aina amin'ny famadihana andraikitra fotsiny fa miandrandra izany.
Mandefitra amin'ny risika - Ny marketing dia mitaky fitsapana sy tsy fahombiazana mba hamantarana ny fahafahana hahomby. Ny fananana ekipa tsy miraharaha dia fomba azo antoka hampiadana ny fandrosoanao raha mbola mandroso ny mpifaninana aminao. Ny ekipanao dia tokony hahatakatra ny tanjona ary hivoatra mba hianatra, hanitsy, hanatsara ary hihoatra ny zavatra andrasana.
Famoronana lojika - Ny fahatakarana ny angona sy ny fizotrany dia fahaiza-manao tena ilaina ho an'ny mpikambana rehetra amin'ny varotra. Ny mpikambana ao amin'ny ekipan'ny varotra dia tokony ho afaka mamakafaka ny fizotrany sy ny vokatra ary mitady vahaolana amin'ny famoronana mba handresena ireo sakana.
Fahaiza-manao ara-teknika – Tontolo dizitaly izy io ary tena ilaina ny manana ekipa ara-barotra izay mahay teknolojia, noana automatique, ary mikasa ny hanitatra ny traikefan'ny tsenanao amin'ny marikao.
Raha ny hevitro manokana, ny fampiasam-bola amin'ny fitiliana fitondran-tena mba hahazoana antoka fa ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia afaka hahomby amin'ny fomba tsy miankina, miaraka amin'ny ekipanao, ary ao anatin'ny kolontsain'ny fikambanana misy anao dia mendrika ny lanjany amin'ny volamena. Raha mitady mpiara-miasa ianao dia miala tsiny aho tsy hanitatra ny ekipanay amin'ny Highbridge.
Ny andraikitry ny departemanta marketing nomerika:
Digital Marketing Manager, Mpitantana Campaign, na Mpitantana tetik'asa - hanara-maso ny tetikasa ary hiantoka ny fiasan'ny ekipa sy ny fampielezan-kevitrao ary mahafeno ny filan'ny fikambanana.
famoronana Tale or Graphic Designer - hihazonana ny tsy fitovizan'ny fahitan'ny marika amin'ny alàlan'ny fantsona nomerika.
Developers na Architects Solution - Ny fampidirana sy ny singa ifanakalozan-kevitra dia tsy maintsy ho an'ny fikambanana rehetra amin'izao fotoana izao, noho izany dia ilaina ny fananana ekipa miomana hanorina back-end matanjaka miaraka amin'ny traikefan'ny mpampiasa tsara eo amin'ny front-end. Raha manana ekipa fampandrosoana ao anatin'ny IT ny fikambananao, dia zava-dehibe ny maha-loharanom-baovao iombonan'izy ireo izay mahazo valisoa noho ny fahaizany mamela ny ekipanao.
Mpanadihady nomerika nomerika - Ilaina tokoa ny ekipa mpivarotra nomerika rehetra mba hanana fitaovana voarafitra handrefesana ny fiantraikany ary koa ny tatitra mahomby izay hanampy ny mpitarika sy ny ekipa hahafantatra ny valiny.
Strategiste momba ny varotra nomerika - ny fandraisana andraikitra rehetra dia tokony hanampy amin'ny fampandehanana ireo tondro fampisehoana lehibe sy tanjona kendren'ny fikambanana. Ny stratejika dia mifanentana amin'ireo sombin-javatra ireo ary manome antoka fa azo ampiasaina tanteraka ireo fantsona, mpanelanelana ary media rehetra.
SEO Manager na manam-pahaizana manokana - Mitohy mitarika ny fantsona rehetra an'ny mpampiasa ny motera fikarohana finiavana mikaroka fanapahan-kevitra momba ny fividianana. Ny sehatra fikarohana ara-biolojika dia manome fampahalalana marobe izay azon'ny ekipa marketing nomerika ampiasaina ary koa fantsona miditra tsara ho an'ny fitarika fitarihana. Ny fananana olona iray mitondra ireo paikady mahomby dia ilaina amin'ny fikambanana rehetra.
Fikarohana manokana momba ny doka - na dia mitaky ezaka sy fahefana hitarika amin'ny valin'ny valin'ny motera fikarohana aza ny fikarohana biolojika, ny dokam-barotra dia afaka mameno ny banga mba hitarika fitarihana. Tsy hoe tsy misy fandaniam-bola sy fahaizana, na izany aza. Ny fividianana doka dia mety ho fahadisoana mahatsiravina sy lafo raha tsy manana ny fahaizana manokana ianao.
Manam-pahaizana momba ny doka - misy tranokala hafa izay tompon'ny mpihaino ezahinao tratrarina, koa paikady matanjaka ny fanaovana doka amin'ireo tranonkala ireo. Na izany aza, ny isan'ny sehatry ny doka, ny fahaiza-mikendry, ny karazana doka ary ny fanandramana fanovana dia tsy siansa fotsiny. Ny fahazoana olona hampitombo ny fiantraikan'ny doka fampirantianao dia tsy maintsy atao.
Mpitantana haino aman-jery sosialy na manam-pahaizana manokana - Ny tambajotra sosialy dia mitohy ho loharanom-pifandraisana amin'ny mpividy ho anao ary koa fantsona tsara hampivelarana ny fahefan'ny marika manokana na matihanina. Ny fananana olona mikaroka, manara-maso ary mampitombo ny vondrom-piarahamoninao amin'ny alàlan'ny fanentanana, fanohanana ary fampahalalana dia paikady matanjaka ho an'ny marika maoderina.
User Experience or Mpandanja Interface Designer - Alohan'ny ahafahan'ny mpandrindra anao eo aloha dia manoratra traikefa iray, mila hamboarina sy hosedraina tanteraka izy io mba hampihenana ny fahasosorana sy hanatsarana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Manana olona mahatakatra famolavolana ny solosaina olombelona dia fampiasam-bola ilaina rehefa mampivelatra ireo traikefa ireo.
mpanoratra - Ny Whitepapers, mampiasa tranga, lahatsoratra, lahatsoratra bilaogy, ary na dia ny fanavaozana ny media sosialy aza dia mitaky mpanoratra manan-talenta izay afaka maneho tanteraka ny tonony, ny toetrany ary ny vaovao izay ezahinao haparitaka. Ny fananana mpanoratra momba ny mpiasa dia mety ho lafo be amin'ny maro… fa tena ilaina izany raha tianao hisy fiantraikany ny fampiasam-bola amin'ny atiny.
Marketer mailaka - Manomboka amin'ny fahaterahana, amin'ny laharam-pahamehana, amin'ny famolavolana atiny… mailaka dia fampitaovana fifandraisana tokana izay mitaky talenta sy fahaizana hahazoana valiny. Feno hipoka ireo boatin-tsofinay ankehitriny, noho izany ny fanamby ny fisokafan'ny mpanjifa sy ny tsindrio.
Manampahaizana manokana momba ny varotra atiny - Inona ireo lohahevitra tadiavin'ny vinavinanao sy ny mpanjifanao? Hanao ahoana ny fitehirizam-boky atiny novokarinao? Ny tetikady momba ny varotra votoaty dia manampy amin'ny laharam-pahamehana sy mamantatra ireo lohahevitra izay hanako… ary koa hiantohana fa mijanona ho lohan'ny fifaninanana ianao.
Ity ny Full Infographic:
Tags: mpivarotra nomerikaHafanàm-po an-barotratoerana ara-barotra nomerikaandraikitra marketing dizitalyekipa marketing nomerikalohateny marketing nomerikagraphic designerlohatenin'ny asa ara-barotraekipa marketingmanam-pahaizana momba ny varotra fikarohanampitantana seomanam-pahaizana momba ny haino aman-jery sosialysolutions architect
Ahoana ny fametrahana fanamarinana mailaka amin'ny Microsoft Office (SPF, DKIM, DMARC)
Dingana 5 hamoronana paikady ara-barotra votoaty mandresy